DHAQAALAHA MAREYKANKA: oo hoos u dhacey ! | Wargeyska Xog-Ogaal
waxaa la isku haystaa sidaloo bixinayo lacag dhan 700 bilyan oo lagu wado in lagu badbaadiyo sharkadahaas kacey. Xukuumada Bush ayaa soo bandhigtay qorshe lagu badbaadinayo shirkadahan oo ay Dowladu kula wareegayso qaar ka mid ah Maalka Shirkadahan/Iskaashatooyinkani dhawaan qafaafey.
Shirkadahan kacey waxay kala yihiin:
1)- Laba Shirkadood oo guryaha iibin jiray oo lagu magacaabo Fannie May iyo Faredie Mac labadaan shirkadood ayaa lahaa guryaha wali daynta loo qaatey 70% inka badan.
2)- Iskaashato wayn oo la yiraahdo AIG oo ah mid caymis waxay ka hanti badan ku lahayd dalka gudahiisa iyo dibadaba. Is-kaashatadan ayaa muranka badan dhalisay kadib markii Dowlada Mareykanka Waaxda Sanduuqa Maalka mas’uulkeedu u ogolaaday Is-kaashatadaan lacag dhan $85 bilyaan doolar oo dayn ah ama carbuun ahaan looga dhisgaayo Iskaashatadaan qafaaftay.
Dowlada Mareykanka waxay kalhore la wareegtay Labo Shirkadood oo waaweyn. ka dib markii ay shirkadahani kaceen ayna ka lumtay lacago farabadan oo inta badan ay daymisay dad aan u qalmin/la aamini karin. Dadkaan badankoodu ma haysan dhaqaale u saamixi kara inay sii wadaan bixinta lacagta ribbada/dul saarka oo marba marka ka sii dambeysa sare u kacayda.
Shirkadaha gaarka loo leeyahay kaligood ma ahan inuu dhaqaalahoodu hoos u dhacey, laakiin Sidoo kale waxaa jirta in Dowlada Mareykanka lafteedu lagu leeyahay balaayiin doolar oo ay ka soo amaahsatey wadano ay ka mid yihiin dalka Shiinaha si loogu sii wado labada dagaal ee ay kula jiraan Muslimiinta ama Islaamiyiinta Dalalka Afgaanistaan, Ciraaq iyo meelo kaloo ay ku jirto Dalka Soomaaliya, sababtuna keentay Inuu Dalka Mareykanku dayntaa qaado waxaa waaye dagaalkii oo ku sii daba-dheeraaday.
Ilaa iyo hadda Quburada dhaqaalaha way ku jahwareersan yihiin sababaha dhabta ah ee uu dhaqaaluhu hoos ugu dhacay si lama filaan ah ! Suaalo badan ayaa arintaa la iska waydiinayaa caalamka oo dhan. Ma dagaalka daba dheeraadey ayaa keenay inuu dumo dhaqaalaha ? Ma tartanka dhaqaale ee China baa u sabab ah ? Ma Anshixii dhaqaale ee Shirkadaha/Iskaashatooyinka ayaa xumaaday ?.
Hoos u dhaca dhaqaale saameyn intee la’eg ayuu Aduunka intiisa kale ku yaalan karaa ? waxaa la filayaa in sidoo kale dhaqaalaha Mareykanka ee hoos u dhacu ku yimid taaban doonto Aduunka intiisa kale. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu Mareykanku joojin doono Isku qaad-qaadka dagaal ee intii uu Bush Dalka xukumay caadada u aheyd
← DAGAAL: Lagu qaadey Ciidanka Ugandha/Afrikaanka. MARKAB SIDA 30 TAANGI: Oo ay haystaan burcad-Badeedka Soomaaliya →